Wednesday September 16, 2020 - 17:02:56 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: Ahmed Osman Mohamad. (Aanis).
Qormadan waxaan kusoo qaadanaynaa
Ereyga Hoobal oo Yaasiin C. Keenadiid ku fasiray: shaydaanka ciyaaraha la tunto, aabbaha u ah. Buuggiisa kalena, ("Ina Cabdulle Xasan), isagoo ka faaloonaya ereyga Jinni wuxuu xusay: "Jinniyada wanaagsan waxaa ka mid ah midka maansooleyda Soomaaliyeed gacan ku siiya curinta maansada. Jinniga noocaan ah waxaa la yiraahdaa, Hoobal.
"Hoobal Soomaalidu waxaa loo bixiyaa qofka heesaha iyo fanka u go'ay".
Magacaan Hoobal wuxuu u eg yahay magac sanamkii Carabtu caabudi jirtay Islamka ka hor oo ahaa Hubal. Sanamkaas asalkiisii hore waxaa carriga Shaam ka keenay Caamir Bin Luxey, oo hogaamiye u ahaa qabiilka Khuzaaca. Waana sanamkii ugu horreeyay ee Qureysh kacbada ag dhigato, baa la yiraahdaa. Haddaba, xiligii Islaamka ka hor Qureysh iyo Soomaaliya in xiriir ka dhexeeyay wax muujinaayo habayaraatee lama hayo.
Waxaase u badantahay in ay ahaayeen Finiiqiyiinta (Fenici) dadka soo gaarsiyay Soomaliya dhaqanka Hoobal, Islaamka ka hor.